MX Linux: Distro haingana sy sariaka miaraka amin'ny fitaovana mahavariana | Avy amin'ny Linux
Ny firaisana amin'ny antiX ary ireo vondrom-piarahamonina taloha MEPIS, teraka ilay MX Linux tena manaitra https://mxlinux.org/, izay mampiasa fitaovana sy kalitao tsara indrindra amin'ny distro tsirairay, mifototra amin'ny Debian stable. Izy io dia rafitra fandidiana milanja antonony, natao hanambatra birao marevaka sy maivana toy ny XFCE miaraka amina fanamboarana tsotra, fitoniana avo lenta ary fampisehoana matanjaka.
Tsara ny manamarika fa na dia miankina amin'ny Debian aza io fizarana io, mampiasa teknolojia Sysvinit manolo ny novaovao indrindra systemd, zavatra iray izay lasa tombony be ho an'ny be dia be. Toy izany koa, noho ny fahamarinan-toerana avo lenta, ny fiankinan-doha mora hianarana, ny vondrom-piarahamonina midadasika ary ny fijery tsara Ny MX Linux dia aseho ho rafitra tsy misy olana amin'ny karazana mpampiasa rehetra.
Ny ekipan'i MX Linux Izy dia efa niasa tamin'ny kinova samihafa an'ny distro nandritra ny 3 taona, ny farany tonga dia ny MX-16 «Metamorphosis», izay efa notsapainay ary entinay anao ny mampiavaka azy.
1 Inona ny «Metamorphosis» MX-16?
2 Endri-javatra amin'ny «Metamorphosis» MX-16
2.1 Fampisehoana «Metamorphosis» MX-16
2.2 Fampiharana «Metamorphosis» MX-16
3 Sintomy ny «Metamorphosis» MX-16
4 Famaranana amin'ny MX Linux 16 «Metamorphosis»
Inona ny «Metamorphosis» MX-16?
Io no kinova farany an'ny distro MX Linux, izay novolavolaina mba ho distro maivana, mifototra amin'ny Debian 8.6 'Jessie' izany, mampiditra endri-javatra avy amina fizarana antiX isan-karazany miaraka amin'ny tontolon'ny birao Xfce 4.12.2. ., ho fanampin'ny fampitaovana ny Linux kernel 3.16 ho an'ny kinova 32-bit sy ny kernel Linux 4.7.0 ho an'ny kinova 64-bit.
MX-16 «Metamorphosis» ampahany amin'ny rafitry ny rafitra AntiX ary ahitana ny sanganasa sy ny hevitra nampiasain'i Warren Woodford ho an'ny azy Tetikasa MEPIS. Ho fanampin'izany dia ampidiriny ao ny Backports sy ny fanampiana ivelany an'ny fitsaharana hitazonana ireo singa amin'ny fivoarana.
Ity distro ity dia manana fahamendrehana amin'ny fametrahana UEFI ary koa mpametraka mpamily tsara.
Mpitantana rakitra MX-16
Endri-javatra amin'ny «Metamorphosis» MX-16
Izy io dia distro miorina, mora apetraka, izay manana ekipa fitaovana tsara sy fanamboarana mandeha ho azy ho an'ny karazana mpampiasa.
Ny lafiny hita maso amin'ity fizarana ity dia mpandala ny nentin-drazana, satria ny mpanamboatra azy dia nisafidy ny fitoniana sy ny fahombiazana noho ny kalitaon'ny sary, saingy azo hatsaraina mora foana amin'ny fampiasana azy xfce.
Izy io dia manana ny fahafaha-mampifanaraka ireo takelaka amin'ny fomba mora, mamela ny fampandehanana ireo feon'ny hetsika ary manana boky torolàlana ho an'ny mpampiasa izy. Toy izany koa, tonga miaraka amin'ny mety hosedraina ho LiveUSB miaraka amin'ny fikirizanana io.
Ireo mpampiasa ny chips AMD, Nvidia, ary Broadcom Wi-Fi dia tokony hipetraka mora foana, satria ezaka be dia be no natambatra tamin'ny fampidirana installers izay mahafeno ny filan'ny fitaovana toy izany.
Fampisehoana «Metamorphosis» MX-16
Ny totalin'ny boot an'ny MX-16 amin'ny milina virtoaly misy 2gb Ram dia 26 segondra. Araka ny HTOP, ny fihinanana fahatsiarovana dia nijanona somary ambany distro toy ny Xubuntu izay misy ihany koa ny birao XFCE. Haingana dia haingana ny fanombohana ny rafitra ary manidy izany. Noho izany ao amin'ity fizarana ity dia tsy misy zavatra holazaina intsony.
Fampiharana «Metamorphosis» MX-16
Ny rindranasa lehibe atolotry ity distro ity aminay dia ireto manaraka ireto:
Mpilalao horonantsary: VLC 2.2.4
Mpitantana / Mpilalao mozika: Clementine 1.3.1
Mpanjifa mailaka: Thunderbird 45.5.1
Office mandeha ho azy: LibreOffice 5.2.2
Averina: LuckyBackup 0.4.8
fiarovana: Teny miafina sy lakile 3.14.0
Terminus: Xfce4 Terminal 0.6.2
Toy izany koa, tonga miaraka amin'ireo rindranasa hafa ireo:
Live: Mamorona Live USB, fitaovana Remaster, Snapshot.
Fikojakojana: Fanamboarana boot, mpitantana Flash, fanovana Menu, mpitantana mpampiasa
Mpikirakira sy mpitantana lozisialy: Mpitantana Broadcom, mpiorina Codecs, fijery tsy miovaova, Fizoran'ny tontonana, Fanteno feo, Feo amin'ny rafitra, Tongasoa, Apt notifier, Hamarino Apt GPG, mpiorina Debian Backports, Fametrahana fonosana, mpitantana Repo, apetrakao Test Repo
Fitaovana: Mitadiava fizarana, mpampiasa Switch, USB unmounter.
Fampiharana ankizy: Sekolin-tsekoly, Kilonga sns.
Graphics: ImageMagik, Inkscape, sns.
Network: Skype, Dropbox, sns.
Famokarana birao: GnuCash, Adobe Reader, Caliber, sns.
rafitra: KDE, LXDE, MATE, sns.
Audio: Fahamarinana, DeaDBeeF, Pithos, sns.
Video: DVDStyler, MPlayer, OpenShot, sns.
Sintomy ny «Metamorphosis» MX-16
Azonao atao ny misintona ireo MX-16 ISO ho an'ny 32-bit sy 64-bit avy ao Eto. Azo raketina amin'ny CD / DVD na USB.
Raha tsy hainao ny mandoro ISO amin'ny usb anao dia amporisihinay ity lahatsoratra ity Mamorona LiveUSB miaraka amin'ny terminal
Famaranana amin'ny MX Linux 16 "Metamorphosis"
Izaho manokana dia mahita an'io distro io mijery mahafinaritra sy miasa ary miaraka amin'ireo fitaovana mahaliana. Faly fa manana safidy hafa systemd, Fa manina aho fa tsy manana rindranasa sasany izay vao haingana kokoa rehefa mampiasa Debian (stable), na dia tsara aza ny manamarika fa farafaharatsiny ny browser sy ny LibreOffice dia misy daty.
Toy izany koa, manana andian-dahatsoratra Fitaovana MX Mendrika ny andramana izy ireo, ary ny fametrahana azy ireo tena mampivadi-po dia mahatonga ahy hanisy teboka maro amin'izy ireo amin'ny karazana tombana.
Ho famaranana, raha mila iray ianao maivana fa fizarana Linux tena miasa tokoa Manoro hevitra anao aho andrana MX Linux 16. Mahafinaritra fotsiny ny fampisehoana ary amin'ny fahitana dia tsara sy mahomby izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » MX Linux: distro haingana sy sariaka miaraka amina fitaovana mahatalanjona
Fitsinjarana mahafinaritra, niaraka tamin'izy io aho nandritra ny herinandro ary faly aho, haingana be ary voafehy.
Azo atoro tanteraka
Gaga ary tena afa-po, tena natolotra indrindra ny 64 bit noho ny fotony ampiasainy, satria ny 32 dia mampiasa 3.16, fototra iray izay manana olana amin'ny Bluetooth. Distro tena tsara
Cornapecha dia hoy izy:
Io no kinova 32-bit voalohany amin'ny fizarana fampiasana ankapobeny izay misy kernel tsy PAE mivantana. Ho an'izay fotsiny dia mendrika ny fanajako rehetra aho ary hosedraina tsara.
Valiny tamin'i Cornapecha
Wolf® dia hoy izy:
Tsy fantatro izay tsy nety nataoko, nametraka ny kinova 32 bitika tamin'ny maody uefi aho, izay ilay tohanan'ny solosaina finday, nahavita ny fametrahana azy io fa rehefa manomboka tsy mavesatra ny rafitra fandidiana dia mijanona amin'ny taratasy mavo izy io
Valio amin'i Lobo®
Wolf angamba ianao tokony hanao azy amin'ny safidy roa. Heveriko fa rehefa manaova ny sary ianao dia manome safidy azonao atao ny misafidy uefi na maody roa. Na inona na inona 32 na 64, raha ny tokony ho izy, tsy maninona izany, amin'ny fotoana boot sy fametrahana azy dia mety hisy lanjany lehibe any aoriana rehefa mampiasa loharano bebe kokoa na kely.
Mamaly an'i Else
Rafael Gonzalez dia hoy izy:
Nanandrana ny kinova 32 bit aho ary nandany ny CPU rehetra AMD Phenom X4 4 tamin'ny fomba diso mandingana ilay rafitra; avy eo nametraka ny kinova 64-bit aho ary nahita rafitra mandeha tsara, ary namboarina kokoa noho ny xubuntu, ary ny linux mint xfce, izay tiako be amin'ny linuxero; raha fintinina dia tontolon'izao tontolo izao ny fampitaovana tsirairay.
Valiny tamin'i Rafael González